Ungabhala njani kuWhatsApp kumntu ongekho kunxibelelwano | I-Androidsis
[Ehlaziyiweyo] Ungawuthumela njani umyalezo kuWhatsApp kumntu ongenabo kubafowunelwa. Ividiyo-isifundo !!
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Whatsapp
Xa sisebenzisa i-WhatsApp, singathumela imiyalezo kubantu esinabo kuluhlu lwethu loqhakamshelwano. Inkqubo yemiyalezo ihambelana noluhlu lwabafowunelwa kwifowuni, ukuze sikwazi ukuthumela imiyalezo kwaba bantu, Sinokutshintsha igama lakho lokunxibelelana kwi-app. Nangona kunokwenzeka ukuba ngexesha elithile ufuna ukuthumela umyalezo kumntu ongekho phakathi kwabafowunelwa bakho.
Ukuba ngumyalezo wento ethile, enje ngento esemsebenzini, isenokungabinangqondo ukuba nalo mntu unxibelelana naye. Kodwa ukuba ufuna ukumbhalela kuWhatsApp, kunyanzelekile. Ngaba oku kunjalo ngokwenene? Inyani yile yokuba kukho ifayile ye- Indlela yokubhalela umntu othile kwi-app, ngaphandle kokuba phakathi kwabafowunelwa bakho.
Inyani yile yokuba lelona qhinga linomdla, omnye wale mi sebenzi ongaziwa ngabasebenzisi abaninzi, kodwa ngokuqinisekileyo oko kusivumela ukuba sisebenzise usetyenziso ngendlela ebhetele. Nangona kule ngqiqo, le nkqubo ayiqhutywa ngokupheleleyo kwi-WhatsApp ngokwayo kwifowuni yethu ye-Android. Inxalenye yayo siza kusebenzisa iwebhusayithi yenkampani, esivumela ukuba sisebenzise lo msebenzi kwifowuni. Ke sinokubhalela umntu ongekho kunxibelelwano lwethu nomnxeba okanye kwiapp.
Iwebhu ekuthethwa ngayo iyafikeleleka zombini kwi-smartphone yethu ye-Android, apho siza kusebenzisa khona isikhangeli, njengekhompyuter. Ke ngoko, ukuba usebenzisa uguqulelo lwewebhu losetyenziso, awuyi kuba nangxaki. Kule meko, senza inkqubo kwi-smartphone ye-Android. Kodwa ungayenza kwikhompyuter yakho ngokukhululeka, usebenzisa idilesi enye esikunika yona. Ngawaphi amanyathelo ekufuneka siwalandele kule nkalo? Sikuxelela yonke into engezantsi.
Bhala imiyalezo kubantu abakhoyo kubafowunelwa bakho kuWhatsApp
Iphepha lewebhu elichaphazelekayo esiza kulisebenzisa yiwa.me. Nangona le ayisiyiyo indlela esiza kuyisebenzisa malunga noku. Kodwa kuya kufuneka yazi inombolo yefowuni yomntu esiza kubhalela kuye. Kuya kufuneka siyigcine engqondweni le nto, kuba kuya kufuneka sifake inombolo yakho kule dilesi. Ukuze sikwazi ukuthumela umyalezo kwi-WhatsApp ngesiqhelo ngokubanzi. Ke ngoko, idilesi iya kuba yinto efana ne-wa.me/nombolo yefowuni.
Nangona apho sibeka khona inombolo yefowuni, kuya kufuneka ubhale inombolo yomntu lowo. Ukongeza, kubalulekile ukuba wazi ukuba kuya kufuneka ubhale le nombolo usebenzisa inkqubo yeefowuni yamanye amazwe. Ke ngoko, ukuba ubhalela inombolo yeSpanish, Kuya kufuneka ufake ikhowudi 34 ngaphambi kokuba ufake inombolo yefowuni. Ke, idilesi esiza kuyifaka kwisikhangeli yinto enje: wa.me/34555555555, umzekelo. Bhala oku kwisikhangeli osisebenzisayo kwi-Android.
Xa ufaka le dilesi kwisikhangeli kwaye uyinika, Iphepha lewebhu leWhatsApp liza kuvela kwiscreen. Kuyo, uyabuzwa ukuba uyafuna ukubhala umyalezo kwinombolo yefowuni osandula ukuyibhala kwidilesi. Apha ngezantsi kwesi sicatshulwa kukho iqhosha elikhulu eliluhlaza, apho ithi khona uMyalezo. Ke ngoko, kufuneka ucofe eli qhosha. Xa sisenza oku, i-app yemiyalezo iya kuthi ivule kwiscreen kwifowuni.
Sele sikwiwindows yengxoxo kuWhatsApp. Oko kuthetha ukuba singambhalela lo mntu ngokwesiqhelo, ngendlela efanayo naleyo sibhalela abanye abafowunelwa kwisicelo. Kodwa ngale ndlela, oku kunokwenzeka ngaphandle kokuba songeze lo mntu kunxibelelwano lwethu nesicelo. Kulula kakhulu ukufumana njengoko ubona. Unokwenza oku ngazo zonke iinombolo zefowuni ozifunayo, ukuba nje usebenzisa ikhowudi yelizwe ephambi kwelo nani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » [Ehlaziyiweyo] Ungawuthumela njani umyalezo kuWhatsApp kumntu ongenabo kubafowunelwa. Ividiyo-isifundo !!
Isikhangeli seOpera sidibanisa iVPN kuhlaziyo lwayo lwamva nje
IVsmart imihlaba eSpain ngeefowuni zayo ezintsha